I-Kilimanjaro, iNtaba i-Kilimanjaro - iDar es Salaam
Afrika Tanzania Dar es Salaam
Indawo: E- Northeast Tanzania
Uhlelo lwezintaba: isigodi sase-East African rift
I-Ridge noma iMassif: i- East African Plateau
Ifomu le-volcano: Stratovolcano
Ubukhulu bomhlangano : 5895 m
Ukunyuka kokuqala: 1889 (uHans Meyer, uLudwig Purscheller)
Engxenyeni esenyakatho-mpumalanga yeTanzania , ephakeme ngaphezu kwentaba yaseMasai, iyindawo ephakeme kakhulukazikazikazi lase-Afrika - iNtaba yaseKhalimanjaro.
I-Kilimanjaro yi-stratovolcano elele, equkethe izingxenye eziningi ze-tephra, i-lava efriziwe nomlotha. Ngokusho kososayensi, i-Kilimanjaro intaba-mlilo yasungulwa eminyakeni engaphezu kwesigidi edlule, kodwa usuku lokuvulwa libhekwa ngoMeyi 11, 1848, lapho libonwa kuqala ngumfundisi waseJalimane uJohannes Rebman.
Izazi-mlando azizange zibhale ukuqhuma kwentaba-mlilo i-Kilimanjaro, kodwa, ngokusho kwezinganekwane zendawo, kwakuseneminyaka engaba ngu-200 edlule. Ngokomphumela wocwaningo olwenziwe ngo-2003, i-lava itholakala ku-crater ngamamitha angaba ngu-400, kodwa ayinayo ingozi, izimpikiswano eziningi zibangelwa ukukhishwa kwegesi okungaholela ekubhujisweni nasekuqhumeni kwe-volcano yaseKilimanjaro.
I-Mount Kilimanjaro eTanzania inamaphuzu amathathu: entshonalanga - iShira, ukuphakama kwayo kungamamitha angu-3,962 ngaphezu kwezinga lolwandle; empumalanga - eMavenzi (5149 m) nasendaweni ephakathi - i-Kibo nenhloko ye-Uhuru, okuyindawo ephakeme kakhulu eNtabeni iKalimmanjaro nayo yonke i-Afrika - ukuphakama kwayo kungamamitha angu-5895 ngaphezu kolwandle.
I-top of Kilimanjaro igcwele iqhwa, eligcwala ilanga elikhanyayo lase-Afrika, mhlawumbe, yingakho intaba ibizwa ngegama elinjalo: i-Kilimanjaro iyintaba ekhanyayo. Izizwe zasendulo zendawo zithatha iqhwa elimhlophe ngesiliva, kodwa isikhathi eside alizange likwazi ukunqoba le ngqungquthela ngenxa yokwesaba izenzakalo eziningi ezihambisana neNtaba i-Kilimanjaro, kodwa ngolunye usuku isikhulu sezinhlanga sala abaqhawe bakhe abaqhawe ukuba baye esiqongweni saseKilimanjaro ngesiliva. Cabanga ngokumangala kwabo lapho "isiliva" iqala ukudilika ezandleni zabo! Kusukela ngaleso sikhathi, iNtaba i-Kilimanjaro ithole elinye igama elithi "Abode kaNkulunkulu weCold."
Isici esithakazelisayo sezintaba yikuguqulwa kwazo zonke izinhlobo zesimo sezulu emhlabeni uma ukhuphukela phezulu - uzoqala uhambo lwakho lokushisa kwesimo sezulu esishisayo futhi izinga lokushisa lokushisa lokushisa kwansuku zonke + 30 ° C, futhi uqede uhambo ezintabeni eziqhwayo zezintaba lapho usuku lokushisa lomoya lungafinyeleli khona +5 ° C , futhi ebusuku kuwela ngaphansi kwezinga. Khuphuka phezulu e-Kilimanjaro nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kodwa izikhathi eziphumelela kakhulu ziyisikhathi kusukela ngo-Agasti kuya ku-Okthoba futhi kusukela ngoJanuwari kuya ku-Mashi.
Imigwaqo ethandwa kakhulu yokuvakasha eKilmanjaro yimizila elandelayo:
Umzila weLemosho uqala entshonalanga futhi udlule endaweni egcinwe e-Arusha kanye ne-Shira plateau. Isikhathi sokuhamba sizoba izinsuku ezingu-8-9, umzila ubhekwa njengendlela ehamba phambili kakhulu futhi enye yezindlela ezilula ukuya phezulu kwe-Kilimanjaro, ngaphezu kwalokho, ingenye yemizila ebiza kakhulu - intengo yokuvakasha kulo mzila iqala ukusuka ku-2 kuya ku-7-10 amaRandi ayizigidi umuntu ngamunye .
Machame - umzila wesibili owuthandwa kakhulu, kusukela eningizimu-ntshonalanga. Umzila uthatha, njengomthetho, izinsuku ezingu-8 futhi ubhekene nezibalo ezinhle ekukhuphukeni kwentela ye-Kilimanjaro, t. ngenxa yenani elanele lezinsuku kanye nobuhle obuhle bemigwaqo kubhekisela kwenye yezindlela ezilula. Izindleko zokuvakasha kulo mzila ziqala kusukela ku-1500 US dollar ngomuntu ngamunye.
Umzila we-Marangou , noma i- Coca-Cola indlela . Indlela elula, ngakho-ke iyindlela evelele kakhulu yokukhuphukela esiqongweni se-Uhuro. Uhambo luhamba ngezinsuku ezingu-5-6, lapho uzohlangana nezindawo ezintathu zokuhlala ezihlala ezintabeni: indlu kaMandara, ephakeme ngamamitha angu-2700 ngaphezu kolwandle, i-hodom yaseHorombo (3.700 m) ne-Kibo hut (4.700 m). Izindleko eziseduze zalolu hambo ngu-1400 US dollar ngomuntu ngamunye.
Umzila Rongai . Lena indlela eyaziwa kancane eqala ukusuka enyakatho yeKilimanjaro, edolobheni laseLoytokytok. Ukuvakasha kuthatha izinsuku ezingu-5-6, ezifanele abantu abangajwayele izixuku zabantu. Ngenxa yokuthi lo mzila awuwuthandwa kakhulu kubavakashi, kungenzeka ukuthi uhlangane ngendlela yakhe emhlambini wezilwane zasendle zase-Afrika. Izindleko ziqala kusuka kuma-dollar angu-1700 US umuntu ngamunye.
Umbwe Route . Umzila onzima kunazo zonke onemithambeka emincane futhi engadluli amahlathi, isikhathi sokuhamba yisikhathi ezinsukwini ezingu-5-6, lapho uzobe nethuba lokuhlola amandla akho nokukhuthazela. Kuyafaneleka kubantu abaqeqeshwe ngokomzimba ngaphezu kwezinga elijwayelekile, abajwayele indlela ethile futhi basebenze eqenjini elincane, elihlangene. Izindleko zomzila ziqala kusukela ku-1550 amaRandi wase-US ngomuntu ngamunye.
Ukuvakashelwa ukukhuphuka eKilimanjaro kungathengwa edolobheni eliseduzane laseMoshi kuma-ejenti okuhamba. Okuvamile kakhulu ukuhamba ngezinsuku eziyisi-5-6 - ngale ndlela, uma ufisa futhi ukhokhele, ungahambisani hhayi kuphela yendawo, kodwa futhi nangamaholide akhuluma isiNgisi. Izinkinga zokuhamba ukuhamba ngaphezu kokukhokhwa ngesikhangiso esibonwayo: ice eliphakade, umsebenzi we-volcanic ngokukhishwa komlotha kanye negesi, imihlaba nemigwaqo edumile e-Kilimanjaro, lapho izivakashi ziwela khona futhi zikhuphuke. Yimuphi umzila ongakhetha kuwo kuncike emandleni akho okwenyama nangokwezimali. Emjikelezweni ngamunye kukhona umpheki nabasango, abavakashi bazofanele bathwale kuphela izidingo zokuphila.
I-Mount Kilimanjaro itholakala edolobheni laseMoshi, elingafinyelelwa ngendlela elandelayo: ukusuka edolobheni elikhulu kunazo zonke eTanzania Dar es Salaam ngebhasi elihamba phambili, ibanga eliphakathi kwamadolobha liyi-500-600 km. Emuzi kukhona amahhotela amaningi ahlanzekile, lapho ungayikunikezwa khona injabulo yokuhlala ebusuku kuphela, kodwa futhi uzothatha uhambo olulungile, welule umqondisi onolwazi.
Kuzo zonke izivakashi
Ukuvakashela iNtaba i-Kilimanjaro udinga imvume ekhethekile, engatholakala kalula kunoma iyiphi i-ejensi yokuhamba.
Sincoma ukuthi wenze imishanguzo edingekayo ngaphambi kokuvakashela iKilimanjaro e-Afrika.
Imayini yeDamond Letseng
Ukwakhiwa kwePhalamende lomongameli wokuqala weKenya
Samburu National Wildlife Resfuge
I-Mausoleum ka-Muhammad V
Izingubo zomshado ezihlanganisiwe
Ingane ayifuni impumu, ayikho i-snot
Yini esiza i-Bellataminal?
Izithelo zikaCranberry zihle futhi zimbi
Ukubhekwa ngetshe lokuthwala - izici zokukhethwa ngamatshe, kuphelile
I-herbia yombilical ezinganeni
Ingabe abesifazane abakhulelwe bangagqoka izithende?
Indlela yokuhlukanisa ukuguqulwa kusuka ekusebenzisaneni?
Izinwele zezinwele zabesifazane 2014
Ukwelashwa kwesifo sofuba se-aorta yenhliziyo
Izimpawu ezingu-10 ezinama-parasites, nemikhiqizo engu-7 ezobasiza ukuba babhekane ngokushesha
Anonymizer - iyini futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Amaqiniso anomdla mayelana nobulili
I-peanut butter paste ekhaya